शहरभित्र रिचार्ज सुरेश रिचार्ज
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई घरी�घरी विदेश जानुहुन्छ । कहिले ब्राजिल त कहिले इरान । किन ? कारण एउटै हो, रिचार्ज गर्न । उहा� आफूलाई रिचार्ज गर्न विदेश जाने गर्नुहुन्छ । उहा� एउटा यस्तो मेसिन हुनुहुन्छ जसको चार्ज विदेशमा मात्रै हुन्छ । नेपालमा हु�दैन । नेपालमा त्यसको चार्जरै छैन । मेसिन नेपालमा बनेको भए पो चार्जर नेपालमा हुनु ।
कुनै पनि विद्युतीय सामान निरन्तर सञ्चालनका लागि चार्ज अनिवार्य हुन्छ । अतः उहा�को पनि चार्ज अनिवार्य छ । उहा� त फेरि यस्तो विद्युतीय उपकरण हुनुहुन्छ जो सञ्चालन यतै हुन्छ तर त्यसको रिमोट कन्ट्रोल भने विदेशमै छ । उहा�लाई बनाउने कम्पनीले सामान मात्रै पठाइदियो, रिमोट पठाएन । रिमोट आपूmस�गै राख्यो । सायद त्यसैले होला, चार्जका लागि उहा� टाइम�टाइममा विदेश गइरहनै पर्छ । ब्याट्रीमा एक लाइन मात्रै बा�की हु�दा उहा� यताबाट जानुहुन्छ, फर्कंदा फुल चार्ज भएर आउनुहुन्छ । चार्ज फुल भएपछि उहा� कसैलाई टेर्नुहुन्न । आ�नै उपप्रधानमन्त्रीलाई त टेर्नुहुन्न भने अरूको के कुरा ? इरानमा देखिहाल्नुभयो । आफूस�गै गएका उपप्रधानमन्त्रीलाई एकातिर पन्छाएर उहा� रिचार्ज गर्नतिर लाग्नुभयो । अब आउने केही दिनसम्म उहा�लाई कसैले नबोले हुन्छ । करेन्टको झट्का लाग्न सक्छ । विद्युतीय सामानमा फुल चार्ज भएपछि यस्तै हुन्छ । बेपत्ता छानबिन
सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको रहेछ जो अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । राष्ट्रपतिसमक्ष पु�याइए पनि यो अध्यादेश पास हुने सम्भावना छैन । राष्ट्रपतिले तिनलाई पारित गर्नुहुने छैन । किनभने यो बेपत्ता छानबिन आयोग पूर्ण छैन । यो मूलतः जनयुद्धकालमा बेपत्ता बनाइएका योद्धा, सर्वसाधारण, कार्यकर्ता, नेता, महिला, पुरुष आदि खोज्ने कार्यमा मात्रै सीमित छ । त्योभन्दा बाहिर यसले खोजी गर्दैन । मुलुकबाट खोजी गर्नै पर्ने कुरा हामीसामु अरू पनि धेरै छन् । जस्तो कि ०६२�६३ सालमा मुलुकमा गणतन्त्र आएको थियो, त्यो अहिले करिब�करिब बेपत्ता छ । लोकतन्त्र त पूरै बेपत्ता भइसक्यो । एकपटक झुलुक्क देखा परेको संघीयता पनि अहिले बेपत्ता छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारमा आउनेबित्तिकै जनतालाई राहत दिन्छु भन्नुभएको थियो । अहिले त्यो पनि बेपत्ता छ । नेताहरूमा सहमतिको खुब चर्चा चल्छ । तर, अहिलेसम्म भेटिएको छैन । पूरा देशबाट सहमति पूर्णरूपमा बेपत्ता छ । बेपत्ता छानबिन आयोगले यसको चाहि� खोजी गर्छ कि गर्दैन ? दसै� आउ�दै छ, अब बजारबाट खाद्यान्न बेपत्ता हुनेछ । सर्वसुलभता, सस्तो भन्ने कुरा त कहा� बेपत्ता हुन्छ थाहै हु�दैन । मलाई लाग्छ, बेपत्ता छानबिन आयोगले यी कुराको पनि छानबिन गर्दैन । अनि कसरी पास हुन्छ यस्तो आयोगको अध्यादेश ? अंशबन्डा
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी एमाओवादी यतिखेर अंशबन्डाको तीव्र दौडबाट गुज्रिरहेको छ । पार्टीका ठालु कमरेड मोहन वैद्यले अलग्गै चुलो लगाएपछि पार्टीका सबै चल�अचल सम्पत्ति पनि भागबन्डा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । जिल्लाको के कुरा, अब त केन्द्रको पेरिसडा�डाको पनि अंशबन्डा गरिने भएको छ । सुनिन्छ, पेरिसडा�डाको ४० प्रतिशत वैद्य पक्षले लाने भएको छ � बा�की ६० मा पनि पछि ३० प्रचण्ड र ३० बाबुरामले लाने होला ।
पार्टीको अंशबन्डा भयो, भवनको अंशबन्डा भयो, जिन्सी सामानको अंशबन्डा भयो । अब राजनीतिक सिद्धान्त र वादको चाहि� के गर्ने ? आखिर त्यसको पनि त अंशबन्डा गर्नुप�यो नि � कमरेड प्रचण्डले सोध्नुभयो, �कमरेड, पार्टी कार्यालयको पनि अंशबन्डा भयो, अब यो �माओवाद� को चाहि� के गर्ने ? यो पनि त हाम्रो सम्पत्ति हो नि � के यसको अंशबन्डा गर्नु पर्दैन ?�
कमरेड वैद्यले भन्नुभयो, �गर्ने भए गर्ने । यसलाई मात्र किन बा�की राख्ने ? लौ गरौ� ।�
प्रचण्डले भन्नुभयो, �उसोभए माओवादीको �माओ� हामीलाई दिनोस् �वाद� तपाईं लानोस् ।�
वैद्यले भन्नुभयो, �किन ? तपाईंलाई वादचाहि� नचाहिने ?�
�चाहि�दैन । मलाई नाम मात्र भए पुग्छ । त्यसैले �माओ� म लिन्छु ।� प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभयो । वैद्य गम्भीर बन्नुभयो । आफूलाई चाहिएको त वादै हो । तर, आफूस�ग भएको वादको नामचाहि� के हो नि ? त्यसको पनि कुनै नाम त चाहियो । भन्नुभयो, �नाम तपाईंले लगेपछि मैले आ�नो वादलाई के नाम दिने ?�
�वाद भए पुगिहाल्यो नि � नाम किन चाहियो ? तैपनि नामै चाहिएको हो भने कुनै पनि हाल्नोस् । वैद्यवाद भन्नुस् अथवा मोहनवाद भने पनि भयो । कि नभए किरणवाद भन्नुस् । वाद तपाईंको भएपछि जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस् ।� प्रचण्डले सुझाव दिनुभयो । सायद सुझावले वैद्यजी सन्तुष्ट हुनुभएछ । उहा�को अनुहारमा दुर्लभै देखिन पाइने मुस्कानको रेखा खिचियो । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम